Barlamaanka turkiga oo ansixinaya heshiis xukuumaddu lagashay Isra’il. – Radio Daljir
Barlamaanka turkiga oo ansixinaya heshiis xukuumaddu lagashay Isra’il.
Agoosto 11, 2016 11:10 g 0
Ankra, Aug 12 2016–Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa sheegay in dhowaan barlamaanka dalkaasi ay fadhigooda ku saxiixi doonaan heshiis ay xukuumadda dalkaasi lagashay dhigeeda Isra’il, si hoos loogu dhigo xiisadaha labada dhinac.
Mevlut Cavusoglu, ayaa waxa uu sheegay in heshiiskaani xukuumaddu meelmarisay uuna yahay mid lagu qaboojinayo xiisaddii kadhalatay dilalkii ciidanka Isra’il u geysteen shaqaale saarnaa markab gargaar u sidey Marinka Gaza oo xilligaasi 6 sano go’doonsanaa.
Xiriirka Ankara iyo Tel Aviv ayaa sii xumaaday markii ciidamada Kumaandoosta dalka Yuhuudu ay weerareen doonta xorriyadda ee Flotilla May 31, 2010, halkaasi oo ay kudileen 9 muwaadin oo Turkish ah 50 kalena ay ku dhaawacmeen.